Last updated: May. 18 2018 | 2 min akhri
Maxaad guys ka fikirto marka galmada? Tani waa hal su'aal oo badan tahay in la dhibtaada haweenka tan iyo wakhtigii Aadan iyo Xaawo. Qarniyo ka soo gudubtay, laakiin weli dumarka yar si kalsooni leh u dhihi karaa in ay ogaadaan dhab ahaan waxa lammaanahooda ku fakaraysaa marka galmo. Dooda hoos ka baadhayaa fikrado laga yaabo in mashquulin nin ee maskaxdaada marka galmada.
Rajadii ma waxaan Dhicis sii daynin aadan
Walaaca Performance marka galmada waa wax kasta oo nin waxa ay soo martay markii ay samaynayaan galmo. Qaar ka mid ah waa wax joogta ah, halka kuwa kale ay qaadato oo keliya qaar ka mid jeer gaar ah sida marka galmo waqti dheer ka dib, helitaanka isku dhafan oo ay la yeesheen cusub, iwm. Walaaca Performance nin taariikh ku shahwada oo ka mid ah waxa ay si gaar caadi ah.
Waxaan la taahaa Ma habboon tahay in sidan oo kale, ama waxa ay ahayd run ahaantii xun?
Taahiisa waa qayb muhiim ah oo ficil kasta oo galmo. Guys ma aha had iyo kalsooni ku saabsan sida ay u la taahaa. Marka galmo, waxay inta badan aakhirka samaynta dhawr isku day oo aan kaamil ay taah. Tani waa sababta oo ah waxay ka Cabsan in taah xun laga yaabo in lamaanahiisa dami. Sidaas, haddii ninkaaga ama saaxiibkaa uu yahay barooranaya jeer oo kala duwan marka galmada si ka duwan, waxaa laga yaabaa inaysan wax dabiici ah oo xaq ugu noqon karaa saamayn ah isku day uu samaynayo moyee moans uu.
Ma jeclaan? Maxay iyadu waa si aamusnaan?
Fikiri Tani waxay sidoo kale ku aallin walaaca waxqabadka in raggu ay leeyihiin marka galmada. Su'aashu waxay inta badan ku dhibo ragga sida haweenka waxaad moodaa inay ka badan vocal badan ragga marka galmo; Si kastaba ha ahaatee, ka reeban yihiin had iyo jeer waxaa.
Waa run waxaa jira haween badan oo tag aamusan oo kaliya sababtoo ah ma jeclaan waxa ku lamaanan sameynayo. Si kastaba ha ahaatee, in had iyo jeer ma ahan kiiska. Xasilloonaan joogtid Qaar ka mid ah oo kaliya sababtoo ah waxay joogi jecel xasilloonaan.
Waxaan la hadli wasakh waxaa habboon?
Nimanka qaarkood waxay la hadli wasakh oo kaliya sababtoo ah waxay si dabiici ah u yimaaddo, halka ay jiraan qaar kale oo aan in kaliya in ay soo jeedin ku lamaanan on. Si kastaba ha ahaatee, inta badan waxaa jira jahwareer, oyna ku saabsan sida ay u badan ku lamaanan jecel yihiin inay maqlaan ereyo sida marka galmada; taasi dhacdo inta badan marka ay raggu waa in xidhiidh cusub.
Oh! Taasi waa kaamil ah
Qowlka Tani waa mid caadi ah oo loogu talagalay ragga kaliya arkay labada nin kaamil ah naasaha ama haashka. Nin u malaynayso si marka uu bilaabo riyaaqayaa tallaabada ugu. Nin maanka kale oo aad bilaabi kartaa, innagoo “oh, taasi waa kaamil ah” ka dib markii goob-joog fal si gaar ah sexy by xaaskiisa.
Fikirka ku saabsan haweenka kale
Dumarka intooda badan ka heli doontaa naxdin leh, laakiin inta badan ragga qabaa saabsan haweenka kale marka galmo. Tani waxay badanaa ka dhacdaa marka galmada noqdo tirsan Goleyaasha ka dib joogi in xiriir muddo sanado ah. Haddii aad rabto in la hubiyo in lamaanahaaga uusan fileynin oo ku saabsan haweenka kale marka galmo, qaadaan tallaabooyin ay ku dhallaanka xiriirkiina.
Kuwaasu waxay ahaayeen kaliya wax yar in nin ka fikiri kartaa marka galmada. Waxaa jiri kara afkaar aad u cajiib ah tacaalaan in nin ee Xusuustana markaad galmo ku xiran tahay xaaladda uu ku jiraa.
Waa maxay labada qof ee saaxiibada, ma aan ogayn waxay ahayd in ay jirto si qarsoodi ah in Mary iyo…
Haddii ay ka timaadaa saaxiibadood, waalidiinta, lulataaye, ama Hollywood, waxaan oo dhan waxay leeyihiin macluumaad been ah in…